Caruur U Dhimatay Roobka Dartiisa – Goobjoog News
Dhimashada labada caruurta ah ee ka yar da’da labada sano ayaa la xaqiijiyey in ay isku biirsadeen cudurka jadeecada iyo roob xalay ka dul da’ay hooy ay ka deganaayeen Kaam ku yaallo degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
Aamina Xuseen Xasan waa hooyada dhashay Xafso Maxamed Aadan oo qabowga dartiis iyo cudurka jadeecada ugu geeriyootay guri ay ka daganayeen degmada kaxda.
Aamina waxay sheegtay in xalay aysan indhaha isa saarin iyada oo xustay in waagu uu fadhi ugu baryey.“ Waxay xanuun saneed hadana xalay ayaa roobka ka tan badiyey iyada oo dhimatay ayaa la arkay waxaana hayey cudurka jadeecada”.
Guddoomiyaha degmada kaxda ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in qoysaska barakaca ku ah degmadaani ay ubaahanyihiin caawimaad dhan walba leh isaga oo dowladda Soomaaliya ugu baaqay in dhankooda ay ka qaataan.
“Baaq dheer waxaan u dirayaa dhammaan hay’adaha sama falka dowlad goboleedka koofur galbeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo cid allaala cidii dadkaas wax tari karo baahida hadda ay qabaan waa waxa ay kagalaan qorraxda iyo roobka”.
Afeey Oo Ka Hadlay Xaaladda Qaxootiga Soomaaliyeed Ee Yemen
Dhageyso Barnaamij Wareedka Galabnimo ee Goobjoog News
Xukuumadda Somaliland oo Bixisay Lacagihii Doorashada Madaxtinimo ee 2017
Guddiga Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Oo La Magacaabay
Xeltte yvlgij printable cialis coupon best place to buy cialis online reviews
Qpuynj wyajoz Viagra mail order cheap cialis online
Ijqtsm nutkma Viagra or cialis is there a generic cialis available in the us
Gulpsn cpwnrl Buy discount cialis online canada pharmacy
Hi, I do think your web site could be having browser compati...
It's remarkable designed for me to have a web page, which is...
a add up to digits who recognizable recti beside 78 http://v...